Axmed Siilaanyo - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo))
Axmed Siilaanyo oo Jooga Xafiiskisa Madax Toyada ee ku taala Hargeysa, Somaliland.
Madaxweynihii 4aad ee Jamhuuriyadda Somaliland
27 July 2010 – 13 December 2017
1936 (Da'diisu waa 84–85)
Axmed Siilaanyo () wuxuu dhashay 1936kii, wuxuuna ahaa madaxweynihii 4aad ee jamhuuriyadda Somaliland sanadihii 2010-2017. Waxa kursiga madaxtinimada loo doortay 26 June 2010 xilkiisina wuxuu dhamaaday 13 Diseembar 2017. Wakhtigii uu madaxweyne ahaa wixuu gaadhsiyeey dalka Somaliland halkii ay hada marayso.
1 Taariikhdiisa oo kooban,
2 Taariikh nololeedkiisa
3 Shaqada iyo waayoaragnimada
4 Doorarkii uu kaqaatay dhismaha qaranka iyo nabadaynta somaliland
5 Dhiirigalinta hanaansocodka somaliland
Taariikhdiisa oo kooban,
Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Maxamed Maxamuud “Siilaanyo" wuxuu ku dhashay tuulada Dheryalay oo ka tiran degmada Ballidhiig ee gobolka Togdheer. Waxbarashadiisii hoose wuxuu ku dhamaystay magaalada Shiikh. Waxbarashadii dugsiga sarena wuxuu ku qaatay dugsiga sare ee Camuud (Ah Jaamacada Camuud imika) ee magaalada Boorame.
Markuu waxbarashadiisa dugsiga sare dhamaystay sannaddii 57kii Mr. Siilaanyo wuxuu u kicitimay dalka Ingriiska halkaasuu ka sii watay waxbarashadiisii sare. Sannadkii 1958kii-60kiina wuxuu magaalada London ee carriga Ingiriiska ku qaatay waxbarashadii diyaar garawga jaamacadda ee advanced level. Sannadkii 1960kii wuxuu waxbarashadiisii jaacamadeed ka bilaabay Jaamacadda Manchester ee dalka Ingiriiska waxaanu bartay cilmiga dhaqaalaha Sannadku markuu ahaa 1965kii wuxuu jaamacadda Manchester ku dhamaystay waxbarashadiisii jaamacadeed waxaanu ka qaatay ashahaada sare ee Masterka.
Mr. Siilaanyo markuu dhamaystay waxbarashadiisa jaamacadeed wuxuu Kusoo noqday dalka si uu cilmigiisa uga faa’ideeyo dalkiisa iyo dadkiisaba. Waxaanu dalkii la odhan jiray Jamhuuriyadda Dimoqraadiga ee Soomaaliya kasoo qabtay xilal kala duwan oo ay kamid yihiin wasiiro sida wasiirka dhaqaalaha.
Axmed Maxamed Maxamuud oo ku magac dheer Siilaanyo wuxuu ku dhashay Degmada dheryaley ee gobolka Togdheer
Waxbarashadiisii dugsiyada Hoose .Dhexe. ilaa dugsiga sare wuxuu ku dhammaystay Dugsiyadii Sheekh iyo Cammuud mudadii u dhaxeysay 1946kii ilaa iyo 1960kii.
1960kii ilaa iyo 1965kii wuxuu Axmed Siilaanyo ku jiray jaamicadda Magaalada Manchester ee dalka Britain, halkaasoo uu ku qaatay shahaadooyinka Bachelar degree iyo Master ee cilmiga dhaqaalaha.
Intii u dhaxaysay 1965kii ilaa Oktoober 1969kii, wuxuu Axmed Siilaanyo ahaa sarkaal sare oo ka soo shaqeeyay Wasaaraddii maaliyada ee dawladdii Soomaaliya ee rayidka ahayd, isagoo gaadhay darejada Agaasime Guud.
Markii militerigu taladii dalkii Soomaaliya afgambi kula wareegeen 21kii Oktoober 1969kii, waxaa Axmed Siilaanyo loo magacaabay Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta. Muddo kadib waxaa laga dhigay Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Guddoomiyaha Guddiga dhaqaalaha qaranka ilaa 1982kii oo uu ka goostay dawladdii kacaanka.
1982kii, oo uu Axmed Siilaanyo tegay London wuxuu markiiba ku biiray jabhaddii dhaqdhaqaaqa waddaniga soomaaliyeed ee SNM , isagoo noqday wakiilka xafiiskii SNM ee London.
Muddadii u dhexeysay 1984 ilaa iyo 1990, wuxuu Axmed Siilaanyo ahaa guddoomiyaha ururka SNM. 18 May 1991kii shirweynihii Magaalada Burco ee beelaha Somaliland iyo ururkii SNM kaga dhawaaqeen goonni isutaaga Somaliland wuxuu Axmed Siilaanyo ka mid ahaa hogaamiyayaashii hormoodka ka ahaa nabadeynta iyo heshiisiinta beelaha Somaliland wada dega.
Axmed siilaanyo wuxuu xubin ka noqday baarlamaanka Somaliland 1993kii ilaa 1997kii. 1997kii ilaa sannaddii 2000 dawladdii Somaliland ee Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal, wuxuu Axmed Siilaanyo ka soo qabtay jagooyinka wasiirka wasaaradda Maaliyadda iyo wasiirka wasaaradda Qorsheynta, isagoo markii danbe iskii isu casilay.
Sannadkii 2002, wuxuu ku dhawaaqay Xisbiga Mucaaridka ee KULMIYE oo uu guddoomiyena ka noqday. Doorashadii Madaxtooyada Somaliland ee April 2003, tartankii Madaxweynaha waxaa Axmed Siilaanyo iyo ku xigeenkiisii Cabdiraxmaan Aw Cali Faarax lagaga helay 80 Cod, taasoo ay aqbaleen.
Mar kale ayaa Xisbiga Mucaaridka ee KULMIYE, uu hadda u soo Sharraxay Axmed Siilaanyo tartanka doorashada madaxtooyada Somaliland ee 2010, isagoo madaxweyne ku xigeenna u sharaxan yahay xisbigiisa Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil, oo loo yaqaanno Zeylici.
Axmed siilaanyo wuxuu leeyahay 5 caruur ahoo kala ah saddex wiil iyo laba gabdhood, oo ay u dhashay xaaskiisa Aamina-weris Sheekh Maxamed Jirdde.
Shaqada iyo waayoaragnimada
Madaxwayne Silanyo oo lagusoo dhaweeyaya wadanka Kuwayt
1965kii wuxuu xilal kala duwan kasoo qabtay Wasaaradda Qorshaynta ee dalkii la isku keen odhan jiray Somalia
1969kii-1973kii Mr. Siilaanyo wuxuu ahaa Wasiirka Qorshaynta 1973-1978 wuxuu ahaa Wasiirkii Ganacsiga 1973-1980 wuxuu ahaa guddoomiyaha guddida Dhaqaalaha ,1980-1982kii wuxuu mar labaad noqday Wasiirka Ganacsiga ee dalkii Somalia.
Axmed Silanyo Kamuu Mid hayn Asaasayaashi SNM  ee Wuxuu Ku Biiray 1982
Mr. Siilaanyo oo kamid ahaa aasaasayaashii ururkii SNM ee ka socday Dhinaca gudaha Soomaaliya ee wakhtigaas, ka dib markuu u adkaysan waayey dhibaatadii iyo dibin daabadii Siyaad Barre ku hayey ummadda Somaliyeed gaar ahaana kuwa kasoo jeeda Somaliland, wuxuu sannadkii 1982kii go’aansday inuu dalka ka baxo oo ka qayb qaato halgankii dhinaca ka ahaa kaligii taliye Siyaad Barre si ummadda looga xoreeyo nidaamkii kali talisnimo.
Isla intuu Mr. Siilaanyo joogay London wuxuu lecturer ka bixin jiray Jaamacado ku yaal Ingiriiska iyo Maraykanka, waxaanu u olalayn jiray qaddiyada xornimo u dirirka ee uu gadhwadeenka u ahaa ururkii SNM.
== Halgankii snm iyo dawrkii uu kaqaatayIsla markuu Mr. Siilaanyo dibadda u baxay wuxuu ku biiray halgankii dheeraa ee ummadda lagaga xoraynaayey taliskii Siyaad Barre waxaanu SNM kasoo qabtay xilal kala duwan. Isla sannadihii 1982-1984 wuxuu noqday guddoomiyaha ururkii SNM ee laanta London. Wuxuu kaloo intuu London joogay u doodi jiray xuquuqda aadmiga ee ku tacadiyi jiray taliskii markaas talada hayey waxaanu la shaqayn jiray ururada xuquuqda aadmiga ee African Watch iyo Amnest International. == Mr. Siilaanyo oo ahaan jiray guddoomiyihii hore ee SNM 1984-1990 waxaa Lagu tilmaamaa inuu yahay guddoomiyii ugu wakhtiga dheeraa uguna fir fircoonaa ee soo qabta talada ururkii SNM. Intuu SNM ka madaxda ahaa wuxuu ururku guul balaadhan kasoo hooyey halgankii ballaadhnaa ee Shacbiga Somaliland ku qaadeen taliskii hore ee Siyaad Barre.
Ururkii SNM oo lagu tilmaamo inuu sababay burburkii nidaamkii hore ee kali kataliska ahaa ee Siyaad Barre, ummadda reer Somaliland u horseeday inay mar labaad xorriyadooda lasoo noqdaan. Waxaana dadka qaarkii u arkaan in Mr. Siilaanyo laba daraale ninkii markaas ay iska soo horjeedeen ee Siyaasad Barre ku eryaday hadal iyo xirfad, dhinaca siyaasadda gudaha iyo dibadana uu albaab walba kasoo xidhay.
Doorarkii uu kaqaatay dhismaha qaranka iyo nabadaynta somaliland
Madaxwayne Siilaanyo oo lataagam masaxwaynihii hore ee somaliland xiligii Doorashada 2010
Mr. Siilaanyo markii dalka la xoreeyey 91kii kama fadhiisan siyaasadda waxaana uu ka qayb galay dibudhiskii iyo horumarkii dalka. Sannadihii 93-97kii wuxuu ahaa mudane ka tirsan golaha wakiiladda, taasoo ku lahaa haybad iyo wax kaqabad laguna bartay daacadnimo iyo toosinta talada dalka.
Mr. Siilaanyo oo lagu tilmaamo inuu yahay shakhsiyaadkii tirada tiradaa yaraa ee ka danbeeyey deganaanshana iyo xasiloonida Somaliland, waxaana loo arkaa inuu dhawr jeer Somaliland ka badbaadiyey dhibaato kusoo fool leh. Ugu horrayn sannadkii 1990kii markii dalka la xoreeyey wuxuu u tafa xaytay nadadaynta iyo xasiloonida Somaliland waxaanu guddoomiye u ahaa guddidii la odhan jiray Forum for Peace oo lagu tilmaamo inay yihiin kuwii ka danbeeyey nabadgelyada iyo xasiloonida ka hana qaadaySomaliland.
Mr. Siilaanyo wuxuu ka mid ahaa madaxdii sare ee SNM ee taga gobolada Awdal, Sanaag, iyo Sool isagoo u olalaynaaya nabadgelyada iyo xasiloonida Maandeeq. Mr. Siilaanyo wuxuu kamid ahaa madaxdii hoggaaminaayey shirarkii bilawgii 91kii ka dhacay magaalooyinka Berbera iyo Burco laysugu hawaynaayey beelaha reer Somaliland ee walaalaha ee uu iska horkeenay nidaamkii hore ee Siyaad Barre.
Sannadihii 1993kiina wuxuu qayb libaax ka qaatay isu soo dhawaanshaha beelahii taageersanaa SNM oo xilligaas qaarkood xurgufi dhex martay. Sidoo kalena wuxuu ka shaqeeyey sannadihii 94-96kii dibuheshiisiintii iyo soo afjaradii colaaddii sokeeye ee beelaha Somaliland ee soo wada galay halgankii SNM. Mr. Siilaanyo wuxuu hormuud ka ahaa shirkii Caynaan ee lagu qabtay magaalada Caynaba, shirkaas oo bud dhig u ahaa soo afjaradii khilaafkii siyaasadeed ee dhex maray beelaha Somaliland. Waxaanu door fiican ka ciyaaray shirarkii ka dhacay sannadkii 96kii Durruqsi iyo Beer.
Sannadii 1997 markii Cigaal dib loosoo doortay wuxuu kamid ahaa golaha wasiirada waxaana uu soo qabtay xilalka Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda iyo Qorshaynta. Wakhtigii uu hayey Wasaaradda Maaliyadda oo u leehay waayo aragnimo badan waxaa uu sugay oo caadi ka dhigay shilling Somaliland oo uu ku jiray qiimo dhac badani, waxaa kaloo uu wasaaradaha iyo hay’adaha dawladda u dejiyey qorshe miisaaman oo ay ku hawl galaan.
Mr. Siilaanyo intuu hayey Wasaaradda Qorshaynta ee Somaliland wuxuu sameeyey talooyin balaadhan oo wax ku oola waxaanu sameeyey qaab iyo nidaam ay ku shaqeeyaan dawladda dhexe iyo ururada caawimada baxsha ee waddanka joogaa, waxaana hirgalay mashaariic intuu ahaa isuduwaha hay’adaha caawimada baxsha. Waxaana jirtay in is casiladiiisii aanay ku farxin ururada samafalku oo arkaayey inuu yahay siyaasi sare oo aragti dheer oo lala shaqayn karo, waxaa kaloo iyana is casiladaas walaac ka muujiyey waddamada jiiraanka ee ee ku bahoobay urur gobaleedka IGAD oo ay qaarkood xidhiidh aad u qoto dheer la leeyihiin.
Mr. Siilaanyo waxaa kaloo laga ixtiraamaa waddamada reer Galbeedka waxaana uu xidhiidh dhow la yeehay waddamada Yurubta midowday,Maraykanka iyo Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa.
Sannadkii 2001 oo ay dalka ka taagnayd khilaaf siyaasadeed oo ba’ani oo ku salaysan habka loo qabanaayo doorashada ka dhacaysay Somaliland, Mr. Siilaanyo wuxuu u tafaxaytay sidii u caadada ahayd inuu dhex dhexaadiyo labadii dhinac ee markaas xurguftu ka dhexaysay oo kala ahaa xukuumaddii iyo mucaaridkii xilligaas. Mr. Siilaanyo inkastaanu ku guulaysan inuu heshiisiiyo labadii dhinac, wuxuu seh ku guulaystay inuu qaboojiyo oo qanciyo labadii dhinac ee is hayey. Taasoo horseeday inaan labadii dhinac ee is hayey ayna ku kicin waxaan dani ugu jirin qaranka.
Dhiirigalinta hanaansocodka somaliland
Shirkii london ee somalida loo Qabtay oo Silanyo Madaxwayne ahaan loo macsuumay
Mr. Siilaanyo isagoo dhiirigelinayaa hannaan socodka dimoqraadiyadda Somaliland wuxuu bishii Mey 2002 aasaasay xisbiga Nabadda, Midnimada iyo Horumarka ee KULMIYE. Xisbiga KULMIYE himiladiisu waa inuu dhiso dawlad kooban oo tayo leh oo hanata talada dalka si bulshadu u hesho daryeelka ay u baahan yihiin, dalkuna u gaadho horumarka la hiigsanaayo ee dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada
Sidaan la socono KULMIYE wuxuu kamid yahay saddexda ee Xisbi ee qaranka waxaanu guul balaadhan kasoo hooyey saddexdii doorasho ee u danbeeyey ee kala ahaa doorashadii degaanka, madaxweynaha 2003kii, tii Golaha wakiilada ee 2005kii.
Waxaana shacbiga badankiisu aaminsanyahay in KULMIYE ku guulaystay doorashadii dalka ka dhacday 2002kii, laakiin dawladdu wax is dhaafisay oo iyadoo adeegsanaysa haybaddii, awooddii iyo hantidii qaranka ay afduubtay natiijadii doorashada oo si aan xaq ahayn loogu dhawaaqay in xisbiga UDUB ku doorashadii guulaystay, inkastoo xisbiga KULMIYE caddeeyey inuu isagu doorashada ku guulaystay, Mr. Siilaanyo wuxuu markii danbe isagoo u tudhaaya oo dhowraya danta qaranka uu ka tanaasulay mawqifkii hore ee ahaa inuu isagu ku guulaystay doorashadii madaxweynimada. Mr. Siilaanyo oo loo arko nimaan jeclayn iskuna dhejin xukunka wuxuu maskabkii u sarreeyey maandeeq ee shacbigu u doorteen ka doorbiday xasiloonida iyo nabadgelyada dadkiisa iyo dalkiisa waxaanu kaga dhabeeyey hadalkii uu yidhi intii muranka natiijada doorashadu socotay ee ahaa : “Somaliland cidkastaba anigaa uga lexojeclo badan dagaal iyo xasilooni darrana kama dhacaymayso”.
Mudane Siilaanyo wuxuu kale oo samir iyo dulqaad ka muujiyey labadii sanadood ee doorashda madaxweynaha dib loo dhigay, taasoo khilaaf iyo muran siyaasadeed oo cakiran dalka gelisay, taasoo markastaba mudane Siilaanyo uu isagu tanaasulay isagoo xeerinaaya danta guud iyo jirintaanka iyo qaranimada Somaliland.
Mudane Siilaanyo wuxuu doorashadan dhici doonta 26ka Juun 2010 yahay musharraxa madaxeynaha, waxaana la saadaalinayaa inuu ku guulaysan doono inuu qabto jagada ugu mudan maandeeq ee ah madaxweynaha qaranka. Markaas waxaan ku boorinayaa dhammaan shacbiga Somaliland inuu codkooda ugu deeqan mujaahid Ahmed Siiaanyo si uu wax ugu qabto dalka iyo dadkaba.
Mr. Siilaanyo waa nin hadalka baaliqi ku ah oo dadka ka dhaadhin kara fikradiisa oo hadal ku qancin kara dadka taageersan iyo kuwa dhaliilsanba. Waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay nin jecel midnimada iyo wadajirka somaliland, waxaa lagu tilmaama dadka ehelu janada u muuqda inta ifka la joogo waana nin ka dhawrsan xumaanta badanaa lagu yaqaano dadka intiisa badan ee qarnigan nool, mr siilaanyo waxaa lagu tilmaamama nin awliyo ilaahay ah oo badanaa dadka wax been ah ka sheega waxay lakulmaan mucjisooyin iyo ciqaabo rabaani ah oo degdeg ah inta la og yahay.mr siilaanyo waxaa lagu tilmaama nin sidiiq ah oo runta jecel, mr siilanyo waxaa lagu tilmaama nin badaana dadka uu la socdaa ay yihiin dad ehelu diin ah, sida mudane saylici,samaale iyo qaar kaloo khayrka ku sifoobay. waana nin aad u fiican
KHAALID MAWLID HAMUD ( NANSHIDA ) mr. silanyo waxa lagu xasuustaa hadaladii wax ku oolka ahaa ee kaga jawaabay geeridii mujaahid Lixle kadib markii la waydii oo isna ku jawaabay SNM waa wada lixle.
waxaa diyaariyay Xog Hayaha M.weynaha Cabdiqani Ahmed Hussein A/lahi ................
Daahir Rayaale Kaahin Madaxweyneyaashii Somaliland
2010–present Talada Haya
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Axmed_Siilaanyo&oldid=204122"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 28 Luuliyo 2020, marka ee eheed 00:07.